ᐈ Yakavanzika Policy ❤️
Kero yewebhusaiti yedu nde: goutuka.com.
Ndeupi ruzivo rwemunhu pachedu ratinounganidza uye nei tichiriunganidza
Kana Vashanyi siya uone Website, isu vanounganidza Data hwakaratidzwa ari inofambiswa chimiro, uyewo mushanyi wacho IP kero uye User mumiririri tambo Browser kubatsira kuona spam.
Tambo isingazivikanwe yakagadzirwa kubva kune yako email kero (iyo inonzi zvakare hash) inogona kupihwa kune Gravatar sevhisi kuti uone kana iwe uri kuishandisa. Iyo Gravatar sevhisi yekuchengetedza tsika inowanikwa pano: https://automattic.com/privacy/. Mushure mekunge mvumo yako yabvumidzwa, mufananidzo wako weprofile unoonekwa kune veruzhinji mune mamiriro epo mhinduro.
Kana iwe ukaisa mifananidzo pawebhu, iwe unofanirwa kudzivisa kurongedza mifananidzo ine data nzvimbo (GPS EXIF) inosanganisirwa. Vashanyi vewebhu vanogona kurodha uye kubvisa chero data data kubva pane mifananidzo pawebhu.
Kana iwe uchisiya mavoti pane site redu unogona kusarudza kuchengetedza zita rako, kero ye email uye web mukiki. Izvi ndezvenzira yako, naizvozvo haufaniri kuzadza zvakare data yako kana iwe uchibva kune rimwe rondedzero. Aya makiki achagara gore rimwechete.
Kana uine e-mail uye iwe unosangana newaiti yepaiti, tichaisa cookie zvishoma kuti tione kana browser yako inogamuchira makiki. Iyi cookie haina dunhu rega uye inobviswa kana shanduro ichivharwa.
Paunosvika, isu tichaisawo makuki akasiyana-siyana kuti uchengetedze ruzivo rwako rwekusvika uye yako yekuratidza sarudzo skrini. Svika makuki mazuva maviri apfuura, uye ratidza makuki sarudzo gore rakapera. Kana ukasarudza "Ndirangarire", kuwana kwako kuchagara kwevhiki mbiri. Kana iwe ukasiya account yako, kuwana makuki kubviswa.
Kana iwe uchigadzira kana kuparidzira chinyorwa, imwe cookie ichachengetedzwa mu browser yako. Iyi cookie haina kusanganisira dunhu rega uye rinongoratidza chizivo chechinyorwa chawakaronga. Inopera shure kwezuva 1.
Zvemukati incrustkubva kune mamwe mawebhusaiti
Zvinyorwa zviri ino saiti zvinogona kusanganisira zvemukati incrustado (semuenzaniso, mavhidhiyo, mifananidzo, zvinyorwa, nezvimwe). Izvo zvirimo incrustado kubva kune mamwe mawebhusaiti anozvibata nenzira imwecheteyo sekunge mushanyi ashanyira imwe webhusaiti.
Aya mawebhusaiti anogona kuunganidza dhata pamusoro pako, shandisa makuki, incrustKuwedzera kwechitatu-bato kuteedzera, uye kuongorora kwehukama hwako neizvozvo zvemukati incrustado, kusanganisira kuteedzera kudyidzana kwako ne incrustado kana iwe uine account uye wakabatana kune iyo webhusaiti.
Inguva yakareba sei tichengeta deta yako
Kana iwe ukasiya chirevo, chirevo uye metadata yayo inochengetwa nekusingaperi. Izvi ndezvekuti isu tigoziva nekuziva nekubvumidza zvinotevedzana zvinotevera, pane kuzvichengeta mumzere wakakwenenzverwa.
Kubva vashandisi vanyoresa pa webhusaiti yedu (kana pane), tinochengetedzawo ruzivo rwemunhu mumwechete rwavanopa muhuwandu hwemashandisi avo. Vese vashandisi vanogona kutarisa, kuchinja kana kubvisa ruzivo rwehupi hwavo chero nguva (kunze kwekuti havagoni kuchinja zita ravo rekushandisa). Vatongi vewebhu vanogonawo kutarisa nekugadzirisa iyo ruzivo.
Ndezvipi kodzero dzaunazvo pamusoro pe data yako?
Kana une nyaya kana zvakasiya netsanangudzo website iyi, unogona kukumbira kugamuchira chinhu aina faira mashoko pachedu tinobatirira pamusoro pako, kusanganisira chero mashoko imi akatipa. Iwe unogonawo kukumbira kuti tibvise chero ruzivo rwemunhu isu tine iwe pamusoro pako. Izvi hazvirevi chero chero dhesi yatinofanira kuchengetera kutungamira, mitemo kana kuchengeteka zvinangwa.
Kwatinotumira deta yako
Mhinduro dzevashanyi dzinogona kuongororwa nebasa rekutsvaga chekutsvaga.
Muridzi Zita: GOTAUKA